The Ab Presents Nepal » साउदीबाट ‘मलाई लिन एयरपोर्ट आउनु है’ भनेर जहाज चढेका प्रेमबहादुर यूएईमा अस्‍ताए!
साउदीबाट ‘मलाई लिन एयरपोर्ट आउनु है’ भनेर जहाज चढेका प्रेमबहादुर यूएईमा अस्‍ताए!
यूएई -: असार ३ गते । साउदीबाट पर्शुराम लिम्बूलाई काकाको फोन आयो । फाेनमा काका प्रेमबहादुर लिम्बूले भन्नुभयाे ‘म भोलि (असार ४ गते) को जहाज चढेर ५ गते काठमाण्डाै आउँदै छु, मलाई लिन एयरपोर्ट आउनु है ।’
प्रेमबहादुर काका अर्को दिनसम्म पनि काठमाण्डौमा नझरेपछि पर्शुरामले सोधीखोजी सुरु गर्नुभयो । साउदीबाट आफू चढेकाे जहाज उड्न लागेपछि प्रेमबहादुरले भन्नुभएको थियो ‘ जहाजको ट्रान्जिट दुबईमा छ, भोलि भेटौँला ।’ पर्शुरामलाई काकाले भनेकाे याे कुरा झलझली याद आयाे ।
‘तर उपचाररत प्रेमबहादुरको शनिबार बिहान यूएईको सारजाहमा ज्यान गयो । ‘त्यही अस्पतालमा कार्यरत नेपाली सुरक्षागार्डले खबर पाएलगतै शनिबार साँझ आफन्तलाई खबर गरेकाे थियाे । ‘प्रेमबहादुरको शव अहिले पोष्टमार्टमका लागि राखिएको छ’ ।
‘शव नेपाल फर्काउनका लागि आइतबार दुतावासलाई जानकारी गराउने र थप समन्वय गर्ने ताप्लेजुङ समाजसेवा यूएईका महासचिव भवानी लिम्बूले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ‘।